हाम्रो बारेमा - आर्केडिया क्याम्प र आउटडोर उत्पाद कं, लिमिटेड
आर्केडिया क्याम्प र आउटडोर उत्पाद कं, लिमिटेड २०० 2005 मा स्थापित भएको थियो, जुन ट्रेलर टेंट, रूफ टेंट, अवनिn्ग, बेल टेंट, क्यानभास टेंट्स, क्याम्पिंग टेंट्स, इत्यादि डिजाइन गर्ने र उत्पादन गर्नेमा विशेषज्ञ छ। हाम्रा उत्पादनहरू 30० भन्दा बढी देशहरू र क्षेत्रहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, नर्वे, यूरोप, अमेरिका र दक्षिणपूर्व एशियामा निर्यात गरिएको छ। आदि
लगभग २० वर्षको निरन्तर विकास र नवीनता पछि, अर्काडिया क्याम्प र आउटडोर उत्पाद कं, लिमिटेड चीनमा एक अग्रणी डेरा निर्माता भएको छ जुन "अर्काडिया" आउटडोर ब्रान्डको स्वामित्वमा छ।
हाम्रो persons व्यक्तिको टेक्निकल टीमको साथ, OEM र ODM आदेशहरू स्वागत छ, तब हामी तपाईंको ड्राइंग, नमूनाको रूपमा गर्न सक्छौं। यसका साथै, हामीसँग हाम्रो व्यावसायिक बिक्री टोली छ, sales सेल्सपर्सनसहित, २ बिक्री पछि र २ बिक्री समर्थन स्टाफहरू जुन शिपिंग र कागजातहरू मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो उद्देश्य पेशेवर, समयमै र रचनात्मक सेवाहरू प्रदान गर्नु हो।
सामग्री खरीदबाट गुणस्तर नियन्त्रण, त्यसपछि उत्पादनको बखत। जब आदेश समाप्त हुन्छ, हामी प्रत्येक pcs ​​सेट गर्नेछौं र एक पछि अर्को निरीक्षण गर्नेछौं, सुनिश्चित गर्न को लागी सबैजना प्रसव गर्नु भन्दा पहिले राम्रो गुणस्तर छन्।
ट्रेलर तम्बू: नरम भुई (ft फिट, ft फूट, १२ फुट), कडा भुइँ (पछाडिको पट, अगाडि पट)
छत शीर्ष तम्बू: नरम छत शीर्ष पाल, हार्ड शेल रूफ शीर्ष पाल, भव्यता
बेल तम्बु: m मिटर, m मिटर, m मी, m मिटर, m मिटर
फिसि। टेन्ट: एकल तह, थर्मल शैली
स्वाग: एकल स्वाग, डबल स्वाग
१. हामीसँग एक पेशेवर टेक्निकल टीम छ, नमूना र रेखाचित्र अनुकूलित गर्न सकिन्छ
२. 80० भन्दा बढी कामदार, कुशल र अनुभवी कामदारहरूको स्वामित्व रहेको कारखाना
100. कडा गुण नियन्त्रण निरीक्षण १००% योग्य हुन सुनिश्चित गर्न
Fabric. विभिन्न कपडाका सामग्रीहरूले विभिन्न ग्राहकहरूको मूल्य र गुणवत्ता आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन्
L. तल MOQ
12. १२ घण्टा भित्र जवाफ दिन सकिन्छ